Abavelisi kunye nabathengisi beTshayina enkulu yokuvulwa kwesinyi sefektri
Ingxowa yangaphandle yaManzi yaNgaphandle yeMidlalo
Ingxowa yamanzi eyenzelwe ngokukodwa ezemidlalo. Uxinzelelo olunganyangekiyo kunye nokunxiba okunganyangekiyo, olomeleleyo kunye nobungqina bokuqhushumba. Izinto ezikumgangatho ophakamileyo ezikulungeleyo ukusingqongileyo zidlulile inani lokuhlolwa komgangatho kunye nokuqinisekiswa. Unokwenza ngokwezifiso iinkcukacha kunye nezinto ozifunayo, kwaye utshatise izixhobo zakho ozithandayo. Ikuvumela ukuba uphinde ugcwalise ukufuma xa ukhwele, kuncede ube ngcono xa uhamba.
Yangaphandle Amanzi Ukugcina isinyi
Esi yingxowa yamanzi eyenzelwe kakuhle enokuvula okukhulu. Umbala oluhlaza okwesibhakabhaka uzisa amava ahlukileyo. Ewe kunjalo, inokwenziwa ngokobungakanani bayo nayiphi na into okanye izinto ozifunayo, ezinjenge-TPU, i-EVA, ne-PEVA. Uyilo olwahlukileyo lwesembozo somlomo wombhobho onokuthintela ukuqokelelwa kothuli. Zilungele zonke iintlobo zemisebenzi yangaphandle. Vumela uzikhulule ngaphandle ngokupheleleyo kwaye usondele kwindalo.
Ingxowa enkulu yokuvula yangaphandle yaManzi
Ibhegi yamanzi yezemidlalo yangaphandle evulekileyo ilungele ukucoca nokuzalisa. Izinto ezikumgangatho ophezulu ezikulungeleyo ukumelana nokusingqongileyo zinokumelana namaqondo obushushu ukusuka ku-20 ukuya kuma-20 degrees, kwaye zinokuziqhelanisa neemeko ezahlukeneyo zangaphandle. Gcwalisa imithombo yamanzi kuwe ngamaxesha anzima. Yiba ngumncedisi wakho wangaphandle.